Umphathi we-KML, okuninzi kwii-Euro ezingama-12- iGeofumadas
Agasti, 2009 Google umhlaba / imephu, egeomates My
Iisombululo ezincinci rhoqo baye babamba ingqalelo, Ndicinga ukuba awuyi kuchitha i-$ 50 kwaye uyayisombulula ukuba yintoni inkqubo eninzi ayiyenzi, kufuneka ube neenhlanhla.
Namhlanje ndifuna ukukubonisa Umphathi weKML, isixhobo esilandelayo kwi-12.95 Euros, sinomlinganiselo ongaphantsi kwe-1 MB kodwa ungaboni nto enye ngaphakathi kule geofumed.
Funda kwaye uhlele idatha
Into engcono kakhulu eyenziwa nguMphathi we-KML ufunda ezininzi iifomathi, zihlele kwaye zithumele kwabanye.
Akukubi ukufunda idatha enjengeMephu eziVulekileyo zesitalato, iGPX, amanqaku eGarmin Way kunye neeNqaku zikaTom zoMdla okanye iiNdlela. Kodwa ngaphandle kokufunda, unokuhlela ezinye zazo, udibanise nedatha ekwiifayile ezahlukeneyo.
Kufuneka uqikelele ukuba uzikholise, ngokuba kwimeko yokuba ne-kml, idibaniselwano zazo zendawo, xa uthumela ngaphandle kwi-cvs ungakhetha ukuzithumela ku-UTM kwaye ubonisa kuphela indawo ehambelana nayo.
Xa uthumela kwelinye ilizwe kwi-GPX ungakhetha ukuba idatha iya kwii-Waypoints, i-Route okanye iitracks. Ungaya nakwi-GPX Mapsource, .lmx kwiiNokia Maps kunye .rte fomathi ezivela kwiNavigon kunye .xml / .trk kwiMedion.
Bonisa kwiGoogle Maps
I-picket enomtsalane kukuba nayiphi na idatha onayo inokuboniswa kwiiMaphu zikaGoogle, ke kulula ukuthatha idatha kwiGarmin kwaye uyiphakamise kwiGoogle Maps ngaphandle kokuyiguqula. Okanye enye into egqithisileyo: funda idatha kwiiMephu eziVulekileyo zesitrato, emva koko uyibonise kwiiMephu zikaGoogle (iivenkile, ewe)
Nantsi itheyibhile ezithethayo ngokwazo.
Iifomati ezifunda Iifomathi ozihlelayo okanye ozithumelayo
I-NMEA (idatha ye-GPS)
I-PLT OziExplorer iTrans
Imephu ye-BCR Motorrad Routenplaner kunye nesikhokelo
I-WPT PCX5 Garmin Waypoints
. bcr weMaphuGuide
I-Garmin POI Loader CSV
IiMephu zeMephu zeNokia
Kwinguqulo elandelayo baqwalasele ukuthumela idatha ngaphandle kwiifomathi ezahlukeneyo ngaxeshanye. Inguqulelo yovavanyo isebenza ngokupheleleyo kwiintsuku ezili-14.
Ungalanda Umphathi weKML apha
Post edlulileyo«Ngaphambilini Touche Google Maps Extractor
Post Next Landa i-AutoCADOkulandelayo »